VerbalizeIt: App, Chinyorwa, Audio uye Vhidhiyo Shanduro Martech Zone
VerbalizeIt: App, Chinyorwa, Audio uye Vhidhiyo Dudziro
Svondo, Kubvumbi 20, 2014 Douglas Karr
VerbalizeIt dudziro papuratifomu migwagwa yezvirongedzo zvako kune yakatarwa nharaunda kududzira, kuongorora uye kudzoka mukati maawa 24-48. Chegumi chete muzana% yevanokodzera kunyorera vanokokwa kujoina dudziro yenharaunda uye mhinduro kubva kuVerbalizeIt hutungamiriri hwemunharaunda, vatengi uye kuenderera kwekuyedza kunoshandiswa kuve nechokwadi kuti vanopa mubairo wevashanduri vepamusoro soro, vanodzidzisa vangangoita vashanduri, uye vabudise varombo-vanoita .
VerbalizeIt inogona kubatsira makambani neshanduro yemavara, dudziro yekuteerera, kushandura vhidhiyo uye kunyange kukubatsira iwe kududzira yako mbozhanhare kana webhu application. Uyu mukana unoshamisa webhizinesi rako kuwedzera pasirese uye kutora mukana wekushandisa mitauro yakawanda usinga wedzere mari yekambani yepasi rose.
Kuedza Livefyre Sidenote yekupindura
Anatomy yeChiitiko Chakakwana